မန်ကျည်းသီး - YOYARLAY Digital Media and News
Sweet ripe tamarind with palm leaves on rattan background. Copy space. Tropical travel, exotic fruit. Vegan and vegetarian concept.
မန်ကျည်းက သစ်မာပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက မျိုးရင်းအပင်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အပူပိုင်းဒေသတော်တော်များများမှာပေါက်ရောက်ပါတယ်။ မန်ကျည်းပင်မှာ ပဲတောင့်လိုမျိုး မန်ကျည်းတောင့်တွေသီးပါတယ်။ အသီးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တဲ့အသားတွေက အစေ့ကိုငုံထားပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးစိမ်းရဲ့ အတွင်းသားက စိမ်းပြီး ချဉ်ပါတယ်။ မှည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အရည်ရွှမ်းတဲ့အသားဖြစ်လာပြီး အနှစ်လိုမျိုးဖြစ်လာကာ ချိုချိုချဉ်ချဉ် အရသာရှိပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးက အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းမှန်စေပြီး အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကို သန့်စင်စေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးက အသည်း၊အူမကြီးနဲ့အခြားအစာခြေအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အစာခြေစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ သံဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကနေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့သံဓါတ် ပမာဏရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သံဓါတ်ကသွေးနီဥဆဲလ်တွေကို တိုးစေပါတယ်။ ဆဲလ်တွေနဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဆီကိုအောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးမှုကိုလည်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကောင်းမွန်စေဖို့ သဘာဝအစားအစာတွေအပေါ်မှီခိုလာကြရပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ်ကို တိုးမြှင့်ပေးတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာမန်ကျည်းသီးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးမှာ အာရုံကြောရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေတဲ့ သီရာမင် (ဗီတာမင် B6) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီး ကနှလုံးကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးက ကိုလက်စထရောကို ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အကျိုးမပြုတဲ့ ကိုလက်စရော (LDL) ကိုကျဆင်းစေပြီး အကျိုးပြုကိုလက်စထရော (HDL) ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဗီတာမင် စီကြွယ်ဝမှုကလည်းနှလုံးသွေးကြောစနစ်အပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်မှုတွေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ibuprofen နဲ့သွေးကျဲဆေးမှီဝဲနေရသူတွေအနေနဲ့ မန်ကျည်းသီးကိုလုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။သွေးယိုစီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်တာကြောင့် အဆိုပါဆေးဝါးတွေကိုမှီဝဲနေသူတွေအနေနဲ့ မန်ကျည်းသီးလုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ မန်ကျည်းသီးကို အလွန်အကျွံစားသုံးပါကသွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုကျဆင်းစေပြီး (hypoglycemia )သွေးတွင်းသကြားဓါတ်လျော့နည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့် တစ်နေ့ကို မန်ကျည်းသီး ၁၀ ဂရမ်ထက်ပိုမစားသင့်ပါဘူး။
မန်ကျည်းသီးနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့သူတွေမှာ အရေပြားမှာအနီအပိန့်တွေထွက်တာ၊အော့အန်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့် မန်ကျည်းသီးဓါတ်မတည့်မှုရှိရင် မန်ကျည်းသီးမစားသင့်ပါဘူး။ မန်ကျည်းသီးမှာ အက်ဆစ်ဓါတ်ပါတာကြောင့် အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင် သွားကြွေလွှာကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကို အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင် သည်းခြေကျောက်တည်တာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးကို မကြာခဏတသွတ်သွတ်စားသုံးတာက အစာချေစနစ်အတွင်းမှာ အက်ဆစ်ပမာဏတွေကိုတိုးစေပြီး အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်တာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးအလွန်အကျွံ စားသုံးမှုက သွေးအားနည်းစေနိုင်သလို သံဓါတ်အားနည်းစေပြီးခေါင်းကိုက်တာ၊ ညီးစီစီဖြစ်တာမျိုးတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးက သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုကျဆင်းစေပြီးသွေးချိုထိန်းညှိမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုသေချာစောင့်ကြည့်ပြီးမှသာ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Previous Previous post: ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်စု
Next Next post: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေကို အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက်အောင် သရဲတွေနဲ့ ခြောက်လှန့်